किन सल्किन्छन् विवाहित पुरुष पराई स्त्रीसँग ? जान्नुहोस् कारणहरू – Nayabook
किन सल्किन्छन् विवाहित पुरुष पराई स्त्रीसँग ? जान्नुहोस् कारणहरू
विवाह पश्चात पुरुष होस् या महिला तेस्रो व्यक्तिसँग सम्बन्ध गाँस्न पुगेका खबरहरु हाम्रो समाजमा निकै नै आइरहेका हुन्छन् । विवाहित पुरुष वा महिलाले शरीरिक वा मानसिक रुपमा परपुरुष वा परस्त्रीसँग सम्बन्ध गाँस्नु कदापि राम्रो होइन । तर पनि यो सबै थाहा भएर पनि किन आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धलाई धरापमा पुर्‍याउँछन् त मान्छेहरू ?
पुरुषहरुले परस्त्रीसँग सम्बन्ध राख्नुका केही कारणहरुबारे तल चर्चा गरिएको छ :
वैवाहिक जीवनमा पुरुषहरु चाँडै नै कुनै न कुनै चिजबाट बोर हुन्छन् । जसले गर्दा दाम्पत्य सम्बन्ध बाहेक जिन्दगीमा नयाँ रोमाञ्चकताको लागि परस्त्रीसँग सम्बन्ध गाँस्न पुग्छन् । तर बिर्सिन्छन् कि यसबाट उनीहरुको जीवनमा ठूलो आँधिबेरी आउनेछ ।
विवाहपछि घर-परिवार र बच्चाहरुको जिम्मेवारीका बीच दम्पतीहरू एक-अर्कासँग प्रशस्त समय बिताउँन पाउँदैनन् । यसबाट सम्वन्धमा खल्लोपना र गह्रुङ्गोपना सुरु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कैयौं पुरुषहरु परस्त्री प्रति आकर्षित हुन्छन् ।
साथीहरुलाई रवाफ देखाउन
विवाहित पुरुषहरु साथीसंगतीको उक्साहटमा पनि परस्त्रीसँग सम्बन्ध राख्न पुगी रहेका हुन्छन् । पत्नीप्रति बफादार पुरुषलाई साथीहरुले ‘जोइटिंग्रे’ भनेर गिज्याउँने पनि गर्छन् । त्यसबाट पनि उनीहरुलाई अफेयर राख्ने हौसला प्राप्त हुन्छ ।
यी ३२ स्थानमा असार २२ गतेदेखि भेरोसेलको खोप लगाइने [ खोप केन्द्रको सूचीसहित ]
वि’वा’ह पू’र्व प’रा’इ पु’रु’षसंग यौ’न सम्पर्क गरेको श्री’मा’न’लाइ था’हा हु’न्छ कि हु’दै’न ?